नि:शुल्क मुटुरोग उपचार शिविरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने ४९ जना बिरामी पहिचान | Nagarik News - Nepal Republic Media
नि:शुल्क मुटुरोग उपचार शिविरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने ४९ जना बिरामी पहिचान
म्याग्दीको बेनीमा शनिबार सम्पन्न नि:शुल्क मुटुरोग उपचार शिविरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने ४९ जना बिरामी पहिचान भएको छ।
काठमाडौको सेभ द हार्ट, म्याग्दीको ओमकुमारी शान्ति कोष, म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) कतार र इशा फाउण्डेशनले बेनी अस्पतालमा आयोजना गरेको दुई दिने शिविरमा एक हजार पाँच सय जना लाभान्वित भएको शिविरका संयोजक हरिकृष्ण गौतमले बताए। शिविरमा म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ जिल्लाका एक हजार ५०५ जनाले सेवा लिएका जानकारी दिए। ८६३ जनाको मुटुको इसिजी, ६०० जनाको इको गरिएको थियो। ४१ जनाको तत्कालै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने चिकित्सकले सुझाएका छन्।
४ जना बच्चा र अन्य १६ जनालाई सेभ द हार्टले काठमाडौमा नि:शुल्क शल्यक्रियाका लागि सिफारिस गरिएको आयोजकले जनाएका छन्। बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराई नेतृत्वमा काठमाडौबाट आएको ४० जना चिकित्कस र बेनी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले सेवा दिएका थिए। स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्शका साथै नि:शुल्क औषधि वितरण सम्बन्धी सेवा पनि दिइएको थियो।
शिविरको समापनका क्रममा चिकित्सक भट्टराईले बालबालिकाहरुमा पनि मुटुरोगको समस्या देखिन थालेकाले सचेत रहनुपर्ने बताए। ‘केही धेरै जटिल समस्या भएका बिरामी भेटिए। अब म्याग्दीको दुर्गम क्षेत्रमा यो शिविर सञ्चालन गर्नेछौ,’ डा.भट्टराईले भने। सेभ द हार्टले देशव्यापी रुपमा शिविर संचालन गर्दै आएको छ। म्याग्दीसहित २३ वटा जिल्लामा विभिन्न समयमा आयोजना गरिएका ९५ वटा शिविर हालसम्म करिव ९६ हजार मुटुरोगीको परीक्षण गरिएको डा. भट्टराईले बताए। शिविरमा हालसम्म करिव १३ सय बिरामीको ओपन हार्ट सर्जरी गरिएको छ भने बाँकी बिरामीहरु निरन्तर सम्पर्कमा रहेर मुटु जाँच गराईरहेका छन।
शिविरका संयोजक पत्रकार महासंघ म्याग्दीका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमले हालैमात्र आफ्नो सानो छोराको मुटु सम्वन्धी रोगको डा. भट्टराईकै टिमले सफल उपचार गरेकोमा धन्यवाद प्रकट गर्दै गौतमले जिल्लामा रहेका थुप्रै मुटुरोगीहरुको सहजताका लागि सेभ द हार्टको टिमलाई अनुरोध गरेर बेनीमा शिविरको आयोजना गरिएको बताए।
शिविरको सहआयोजक ओमकुमारी शान्ति कोषका अध्यक्ष राजेश शाक्यले वि.स. २०७१ सालमा स्थापना भएको कोषले हालसम्म २४९ जना बिरामीहरुको उपचारमा सघाएको जानकारी दिए। १ करोड ३ लाखको अक्षयकोष रहेको कोषले आफ्नो व्याज र अभियानबाट हालसम्म २ करोड, ५३ लाख, १९ हजार १२९ बिरामीको उपचार तथा विपतको समयमा सहयोग गरेको शाक्यले बताए।
शिविरमा भेटिएका विपन्नलाई काठमाण्डौसम्म जान आवश्यक सहयोग समेत गरिने सचिव लोकेश पुन मगरले बताए।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७९ १९:३४ शनिबार